နည်းပညာ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
Successful email marketing takes more than building lists and converting subscribers to loyal customers. The truth is, you needasolid အီးမေးလ်စျေးကွက် strategy in place to get the ball rolling smoothly. And an important part of an email marketing strategy is the email marketing sales funnel.
သင့်ကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်သော Coding စခန်းရွေးချယ်ရန်လမ်းညွှန်
ဇြန္လ 2, 2021 ဇြန္လ 2, 2021 Shahid Ibrahim	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာသည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကဏ္aspectsများကိုသာအကျိုးသက်ရောက်ရန်သာရည်ရွယ်သည်ဟုအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မိဘတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏စိတ်ထဲတွင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်သင်၏ကလေးများအားအနာဂတ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးများအားနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်တိုးတက်မှုများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်ကူညီရန်သင်သည်သင်၏ကလေးများကိုပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများကိုဘားကုဒ်များဖြင့်မိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ဇြန္လ 2, 2021 ဇြန္လ 2, 2021 Rajkamal	မှတ်ချက် Leave
ဆန္ဒမဲပေးခြင်းသည်မဲများခြင်းနှင့်အချိန်ကုန်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းလုံခြုံရေးနှင့်စစ်ဆေးခြင်းမရှိသောကြောင့်ချိုးဖောက်မှုများနှင့်လိမ်လည်မှုများကိုအလွယ်တကူခံရနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်တိကျမှုအားဖြင့်ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ထို့ကြောင့်အွန်လိုင်းမဲပေးခြင်းကိုအလားအလာရှိသောမျက်စိဖြင့်မြင်ခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးအလိုအလျောက် - သင်၏ Biz အတွက်စတင်မှုလမ်းညွှန်
မေလ 29, 2021 မေလ 28, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
လုံခြုံရေးအလိုအလျောက်စနစ်သည် ၀ င်လာသည့်လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ သတိပေးချက်များကိုသူတို့ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှတန်ဖိုးဖြတ်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ဦး စားပေးသတ်မှတ်ခြင်းတို့အားဖြင့်ကူညီပေးသည်။
လုံခြုံရေးအလိုအလျောက်မတီထွင်မီလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်လုံခြုံရေးပြproblemsနာများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေရန်တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြန်လည်ကုစားခြင်းသည်ထိရောက်မှုမရှိသောကြောင့်သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုသိသိသာသာခြိမ်းခြောက်နိုင်သည်။ လုံခြုံရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်၏လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများသည်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်တိုင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီးလက်ဖြင့်ပြန်လည်ကုစားရန်မလိုအပ်တော့ပါ။
Pandemic ခေတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ“ Symposium” App သည်အနာဂတ်ဖြစ်သည်။
မေလ 28, 2021 မေလ 28, 2021 Monique Lore` Stinson	မှတ်ချက် Leave
၂၀၂၁ ခုနှစ်အလွန်ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုကာလကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအချိန်ကာလမှအချို့သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများရှိသည်။ အချို့သောအရာများသည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီးအချို့သည်ထာဝရပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းသွားလာလမ်းစဉ်သည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ၀ င်ငွေကိုအွန်လိုင်းရှာဖွေခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ရှိနေခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်များနေသောမိဘ၊ အချိန်ပိုင်းပညာပေးသူ၊ အလွတ်တန်းစာရေးဆရာ၊ homemaker သို့မဟုတ်ဝါသနာပါလျှင်ကော။
အဘယ်ကြောင့် Python သည်ဤမျှလျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသနည်း - အနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
မေလ 27, 2021 မေလ 27, 2021 Shardul Bhatt	မှတ်ချက် Leave
Python တွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေတာသိပ္ပံအထိစနစ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် DevOps အထိအမျိုးမျိုးသော application များရှိသည်။ အလျှင်အမြန်တိုးတက်နေသော Python နှင့်သက်ဆိုင်သည့် tag သည် Pandas ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသန၊ ဒေတာသိပ္ပံနှင့်စက်သင်ကြားရေးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
Python ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်အညီအမျှကြီးထွားနေသည်။ အဓိကအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ အစိုးရနှင့်တက္ကသိုလ်များ။ Python ကိုအလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေတဲ့ဒေတာကိုဒေတာသိပ္ပံ၊ စက်သင်ကြားရေးနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများစွာသည် Python ကိုသူတို့၏ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားရွေးချယ်သောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်ဤနည်းပညာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခဲ့သည်။
Live Streaming အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များ
မေလ 27, 2021 မေလ 27, 2021 Hemendra SIngh	မှတ်ချက် Leave
Live Streaming Apps သည်ယနေ့ခေတ်တွင်လူကြိုက်များလာသည်။ အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာ NETFLIX ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အမြတ်အများဆုံးထုတ်လုပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လည်းတွေးနေလျှင် Netflix လို app တစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ Netflix, Amazon Prime သို့မဟုတ် Disney Hotstar ကဲ့သို့သောဗီဒီယို streaming အက်ပလီကေးရှင်းကိုတီထွင်ရန်အတွက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုသိလိုလျှင်၎င်းဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အမြင့်ဆုံးအသိပညာရရှိရန်ဆောင်းပါးနှင့်ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် Fungible Token ကိုဖန်တီးပါ
မေလ 23, 2021 မေလ 23, 2021 Marianne ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
မည်သူမျှ crypto စုဆောင်းခြင်းလောကသည်ယခုအချိန်တွင်ကဲ့သို့လူကြိုက်များဖြစ်လာရန်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံး၊ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ဂီတသမားများနှင့်အားကစားအမျိုးမျိုးမှကစားသမားများကဤဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤသည်မှာစီးပွားရေးသမားများအားအမြတ်အစွန်းများသောနယ်ပယ်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်ဆန္ဒရှိရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည် Non-Fungible တိုကင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု.
မေလ 22, 2021 မေလ 21, 2021 ဗစ်တိုးရီးယားစမစ်	မှတ်ချက် Leave
လူတွေကအပန်းဖြေဖို့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားကြတယ်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည် ဦး နှောက်ကိုတက်စေပြီးသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်းလူများကိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောကြောင့်အကြောင်းမှာပျော်စရာကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည် serotonin ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ပျော်ရွှင်သောဓာတုဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (IT) သည်အဆတိုးများပြားလာသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပေါက်ကွဲမှုကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည်သင်၏အိုင်တီကုမ္ပဏီများမှတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ချင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်မလုံလောက်ပါ။ သင်၏အရောင်းရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ထိရောက်သော၊ ထိရောက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုသင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
မေလ 16, 2021 မေလ 13, 2021 နယူးယောက်မြို့	မှတ်ချက် Leave
မေလ 13, 2021 မေလ 11, 2021 Marianne ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
CoinMarketCap အဆိုအရစျေးကွက်အနိမ့်ဆုံးဒေါ်လာ ၂၇.၉၈ ဘီလီယံနှင့်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ ၂.၉၄ ဘီလီယံနှင့်အတူ Non-Fungible Tokens (NFTs) ၏ဖြစ်စဉ်သည်ယခုအခါအဖိုးတန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အနုပညာရှင်များ၊ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ၊ ဒီဇိုင်နာများ၊ ဂိမ်းကစားသူများ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်၎င်းသည်ကြီးမားသောတန်ဖိုးကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 3, 2021 ဧပြီလ 29, 2021 Nirav Parmar	မှတ်ချက် Leave
12... 35 ပို့စ်အဟောင်းများ